ကမမောင်း-ဝါးဘိုးတော ကားလမ်းအချို့တွင် ရေကျော်လျက်ရှိရာ မော်တော်ယာဉ်ငယ်များ အနေဖြင့် သွားလ - Yangon Media Group
ဘားအံ စက်တင်ဘာ ၂
ကရင် ပြည်နယ် ဖာပွန်ခရိုင် ကမမောင်း မြို့တွင် မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီး သံလွင်မြစ်ရေမြင့်တက်လာသော ကြောင့် ယနေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီက ဖာပွန်-ကမမောင်း-ဝါးဘိုးတော ကားလမ်းအချို့တွင် ရေကျော်လျက်ရှိရာ မော်တော်ယာဉ်ငယ်များအနေ ဖြင့် သွားလာရခက်ခဲလျက်ရှိပြီး မော်တော်ဆိုင်ကယ်များသွားလာ ရေးအဆင်ပြေစေရေးအတွက် စက်လှေများပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီး သံလွင်မြစ်ရေမြင့်တက်လာသောကြောင့် ကမမောင်းမြို့တွင်း ကားလမ်းအရှည် ပေ ၅ဝ ခန့်တွင် ရေအနက်နှစ်ပေကျော်ခန့် ရေကျော်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကမမောင်းအထက်မီဇိုင်းကျေးရွာ ကားလမ်းအရှည် ပေ ၅ဝ ခန့်တွင် ရေကျော်လျက်ရှိသော်လည်း မော် တော်ယာဉ်ငယ်များနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအနေဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားလာသော်လည်း သွားလာရခက်ခဲကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ ကမမောင်းမြို့ မိတ္ထီလာ ကျေးရွာကားလမ်းအရှည် တစ်မိုင်နီးပါးခန့်တွင် ရေအနက် သုံးပေခန့် ရေကျော်လျက်ရှိရာ မော် တော်ယာဉ်များအနေဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားလာနေသော်လည်း အချို့ယာဉ်ငယ်များအနေဖြင့် ရေပြန်ကျမည့် အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိကြောင်း နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကို စက် လှေဖြင့်တင်ပြီးသွားလာရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖာပွန်-ကမမောင်း-ဝါးဘိုးတောကားလမ်းအချို့မှာ ရေ ကျော်နေသည်မှာ သြဂုတ် ၁၃ ရက် မှစ၍ ယနေ့အထိရေ ကျော်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မနေ့ကမိတ္ထီ လာကျေးရွာ ကားလမ်းတွင်ရေပို၍ ပြန်လည်တက်လာသည်ကိုတွေ့ရ ကြောင်း၊ မော်တော်ယာဉ်ငယ်များ အနေဖြင့် သတိထားပြီးသွားလာရန်လိုကြောင်း ကမမောင်းယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
သြစတြေးလျ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ တစ်ဦးအား ကမ္ဘောဒီးယား တရားရုံးက သူလျှိုမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ချမှ??
ပျက်စီးသီးနှံများ ပြန်လည် စိုက်ပျိုးရန် ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်
ရန်အောင်၊ လူမင်း၊ ရဲမင်းပိုင်၊ နေဆန်း၊ ဟန်နီ တို့ ပါဝင်မည့် ‘Cover’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကန်တော့ပြွဲ??